Soccer Weekly Tips - Champions League
ဘာစီလိုနာကို ရင်ဆိုင်ရန် မိုရက်တာ အသင့်ရှိဟု ချယ်လ်ဆီးနည်းပြ ပြောကြား
Created on Saturday, 17 February 2018 13:49
Written by zayzai
လန်ဒန် - ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် တစ်လကြာ အနားယူခဲ့ရပြီး ဝက်စ်ဘရွန်းကို ၃-၀ ဂိုးဖြင့် နိုင်သောပွဲ တွင် ဒဏ်ရာထပ်မံရခဲ့သည့် စပိန် တိုက်စစ်မှူး မိုရက်တာသည် ဘာ စီလိုနာကို ရင်ဆိုင်ရမည့် ချန်ပီယံ လိဂ်ပွဲအတွက် အသင့်ရှိမည်ဟု ချယ်လ်ဆီးနည်းပြ ကွန်တီက ပြောသည်။
Read more: ဘာစီလိုနာကို ရင်ဆိုင်ရန် မိုရက်တာ အသင့်ရှိဟု ချယ်လ်ဆီးနည်းပြ ပြောကြား
ဘာစီလိုနာနှင့် ချယ်လ်ဆီး ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက်အဆင့်တက်
Created on Friday, 24 November 2017 17:05
ယမန်နေ့က ကစားခဲ့ သော ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်များတွင် ချယ်လ်ဆီးက ၁၀ ဦးကျန် ကာရာ ဘက်ကို ၄-၀ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ ပြီး တစ်ပွဲကစားရန် ကျန်သေးချိန် တွင် ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘာစီလိုနာက လည်း ဂျူဗင်တပ်နှင့် ဂိုးမရှိသရေကျပြီးနောက် တစ်ဆင့်တက်ခဲ့ သည်။ ဘာစီလိုနာသည် အုပ်စု ဗိုလ်ဖြင့် နောက်တစ်ဆင့်သို့ တက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Read more: ဘာစီလိုနာနှင့် ချယ်လ်ဆီး ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက်အဆင့်တက်
ရော်နယ်ဒို ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုးစံချိန်တင်
Created on Friday, 24 November 2017 17:04
ရီးရဲလ်က အေပိုးလ်ကို ခြောက်ဂိုးပြတ် နိုင်သောပွဲတွင် နှစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့သည့် ပေါ်တူဂီ တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုသည် ၂၀၁၇ အတွင်း ချန်ပီယံလိဂ်၌ စုစုပေါင်းသွင်းဂိုး ၁၈ ဂိုးရှိလာကာ တစ်နှစ်တာအတွင်း ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာသည်။
Read more: ရော်နယ်ဒို ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုးစံချိန်တင်
ဆီဗီလာနှင့် သရေကျပြီးနောက် ကစားသမားများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို သံသယမရှိဟု လီဗာပူးနည်းပြပြော
Created on Friday, 24 November 2017 17:03
ပထမပိုင်းတွင် သုံးဂိုး ပြတ်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ဒုတိယပိုင်းတွင် အိမ်ရှင်ဆီဗီလာ ၏ ချေပဂိုးများကို ခွင့်ပြုရကာ တစ်မှတ် ခွဲဝေပေးရပြီးနောက် လီဗာပူးနည်းပြ ဂျာဂန်ကလော့ပ် က ကစားသမားများ၏ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယမရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
Read more: ဆီဗီလာနှင့် သရေကျပြီးနောက် ကစားသမားများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို သံသယမရှိဟု လီဗာပူးနည်းပြပြော
စပါး၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့် မန်စီးတီး ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက်အဆင့်တက်
Created on Friday, 24 November 2017 17:02
ယခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ် တွင် အခက်အခဲဆုံးအုပ်စုများ အနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် အုပ်စု (H)၌ ထိပ်ဆုံးနေရာရခဲ့ပြီးနောက် သံသယဝင်သူများ မှားယွင်း ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီဟု စပါးတိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်းက ပြောသည်။
Read more: စပါး၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့် မန်စီးတီး ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက်အဆင့်တက်
ဘင်ဖီကာနှင့် ပွဲအတွက် ကစားသမားများကို အနားပေးမည်မဟုတ်ဟု မော်ရင်ဟိုပြော
ချယ်လ်ဆီးနှင့်ပွဲတွင် မျောက်လို အော်ဟစ်ခဲ့၍ ရိုးမားအသင်းကို အရေးယူ
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရရှိရေး ဟော်ဖန်ဟိုင်းနှင့်ပွဲတွင် လုပ်စရာများစွာ ကျန်နေသေးကြောင်း လီဗာပူးနည်းပြပြော
ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်အဆင့်တွင် လီဗာပူးနှင့် ဟော်ဖန်ဟိုင်း တွေ့ဆုံ
Soccer Weekly Tips on Facebook
ရီးရဲလ်ကွင်းလယ်လူ တိုနီခရုဇ် ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် သီတင်းနှစ်ပတ်ကြာနားရမည်
ယူရိုပါလိဂ်၌ ဒေါ့မွန်နှင့်အာဆင်နယ် အနိုင်ရ
ဒေါ့မွန်တိုက်စစ်မှူး အော်ဘာမီယန်ကို အာဆင်နယ်ခေါ်ယူ၊ အိုဇေးလ်ကို စာချုပ်သက်တမ်းတိုး
နောက်တန်းကစားသမားများ အမြန်ပြန်လည် ကစားနိုင်မည်ဟု ရီးရဲလ်နည်းပြဇီဒန်းမျှော်လင့်
Copyright © 2010-2013 Myanmar Media Group. All Rights Reserved.
Designed by Amazing Ingenuity Systems